Haikus: zithini, izinto kunye nokunye | Uncwadi lwangoku
Uncwadi olufutshane isikhewu esihlala sanda siqala ukwenziwa kulungelelwaniso lwabafundi kunye nababhali abatsha ngenxa yendawo ye-Intanethi esivumela ukuba sihlangule onke loo mabali amancinci, iivesi kunye nemibongo evusa umfanekiso, imvakalelo okanye isingxengxezo esilula sokubaleka.
Omnye wemizekelo ebalaseleyo yale fever yomncinci kwaye ngokuqinisekileyo uninzi lwenu sele nilwazi, ngu haiku (俳 句), ekwabizwa ngokuba yihaiku, uhlobo lwe Umbongo wamandulo waseJapan ngokubanzi isekwe ukwakhiwa kweevesi ezintathu zamagama ama-5, 7 no-5, Inguqulelo yaseNtshona yeetriki ezili-17 zeeblackberry ezisetyenziswa yihaiku yoqobo. Ezinye zeemfuno ezifunwayo lolu hlobo loncwadi lwaseMpuma zibandakanya eyaziwayo njenge kigo (語 語), ligama elibhekisa kwixesha elithile lonyaka okanye loo njongo iqhubekayo yokusondela kwindalo.
Ukusukela kwinkulungwane yeshumi elinesixhenxe I-haiku yathandwa njengendlela yokubonisa inkolo yaseJapan yeZen enkosi kwinkosi uBashöAbabhali abaninzi baqhubekile nokulungelelanisa imitha yoqobo ngelixa abanye beyiguqule kancinane, bezala i-haikus eneereferensi yeminye imixholo kwaye ineevesi ezinamalungu amaninzi.
Yaqala njani ihaikus
Imvelaphi yehaikus inento yokwenza nenkolo kwiTshayina yakudala. Ngelo xesha lobuBuddha, ubuConfucius, nobuTao, ​​babedume kakhulu njengendlela yokufikelela kwabanye nokubhenca iingcinga. Nangona kunjalo, ibikwinkulungwane yeshumi elinesithandathu xa beqala ukwaziwa ngcono ngenxa yombulelo kuMatsuo Bashoo, elinye lawona manani abamele le mibongo.
Kuyabonakala ukuba, ihaiku yindibaniselwano yeeHaikai, eziyimibongo yeevesi ezingama-36, 50, okanye ezili-100 ezaqanjwa kwiqela, oko kukuthi, phakathi kwabantu abaliqela, umbongi oyintloko kunye nabafundi awayenabo. Abokuqala kuye kwafuneka babhale iivesi ezi-3, ezinamalungu ama-5-7-5. Aba babizwa ngokuba yiHokku. Emva koko eyesibini, kuye kwafuneka enze iivesi ezimbini ze-7-7 njalo njalo kuzo zonke ezinye, enika ifom epheleleyo ku-Haikai ebonakala ngathi ibhalwe ngesandla esinye.
1 Uyibhala njani ihaiku: izinto
1.4 Yenza imvakalelo
2 Bhala ihaikus: uyenza njani
2.1 Funda ihaikus
2.3 Xelela into
3 Ukukhethwa kweehaus ezidumileyo
Uyibhala njani ihaiku: izinto
Ukuba unomdla wokufunda ukwenza ihaikus, okokuqala kufuneka uyazi ukuba zeziphi izinto eziyimfuneko (kwaye zeziphi iimpawu) zehaikus. Zezi:
Ihaiku yenziwe ngeevesi ezintathu. Eyokuqala kwezi-5 zamagama, eyesibini kwele-7 kunye neyesithathu ku-5. Xa zizonke, kufuneka kubekho amalungu angama-17. Le yile haiku yakudala, nangona kule mihla kuvunyelwe ukwahluka kancinci phakathi kweevesi. Ngoku, itotali iseku-17.
Ikigo kukubandakanywa ngaphakathi kwehaiku, yexesha lonyaka. Oko akuthethi ukuba kuya kufuneka ubize inyanga ekuyo, okanye ukuba kusentwasahlobo, ihlobo, ukuwa okanye ubusika. Kodwa into emele oko: ikhephu, umlilo, amagqabi, iintyatyambo ...
Zininzi iihaikus, kwaye zonke zinemixholo eyahlukeneyo, kodwa iiklasikhi zisebenzisa indalo njengezinto ezisisiseko kwindalo yazo. Ke ukuba ufuna ukubhala kufutshane ne "qobo "kangangoko kunokwenzeka, cinga ngendalo.
I-haiku ayidibanisi amagama ahambelana kakuhle kwaye yiyo loo nto. Kuya kufuneka babandakanye umfundi kwaye babenze bazive xa befunda. Kungenxa yoko le nto kunzima kakhulu ukubhala iihaikus ezilungileyo ngokwenene, kuba kuya kufuneka ukhethe amagama athile kwaye ubanike imvakalelo ukuze abantu babenemvakalelo kunye nabo.
Bhala ihaikus: uyenza njani
Ngoku ukuba uyazi izinto, lixesha lokuba uzisebenzise. Okokuqala, ungatyhafi ukuba ezokuqala aziveli, okanye zimbi, kuba kuya kufuneka uye phambili ukuphucula. Nangona kunjalo, kukho izinto onokuzenza.
Xa umbhali efuna ukubhala, kufuneka aqale abe nesiseko, kwaye oku kufezekiswa ngokufunda iinoveli kunye nemisebenzi enxulumene nokuthanda kwakhe. Kuyafana nakwihaikus. Ukuba ufuna ukuzibhala, okokuqala kufuneka ufunde ezininzi ukubona umongo wazo.
Musa ukoyika ukuphenjelelwa ngumbhali. Kwezokuqala eziza kwenzeka, kodwa kancinci kancinci uza kuchaza ubuntu bakho kwaye wenze indalo eyintsusa.
Uziva njani xa ubona amanzi emvula esihla? Kwaye ubona nini ukuphuma kwelanga okanye ukutshona kwalo? Ngamaxesha athile, Izinto zemihla ngemihla azisenzi sizive, ukanti siyazibona. Ke ngoko, ukucinga ngokujonga loo mvakalelo kusenza sincedeke ekwenzeni ihaikus.
Umzekelo, usuku olunamafu lunokuthetha usizi kwabanye, kodwa kwabanye lulonwabo; Ukubanda kunokuthetha ukuba rhabaxa, kodwa nokusondela kwabanye.
Ungazami ukufumana iivesi ezifanelekileyo ukuba azibali. Yeyona nto imbi onokuyenza. Kuya kufuneka wenze ibali elincinci kakhulu kwezi vesi zintathu zivuyisayo kwaye, ukongeza, iyonke ebalini.
Ukukhethwa kweehaus ezidumileyo
Ukugqiba, nantsi eminye imizekelo yeehaikus ezidumileyo ukuze waziqhelanise nazo.
Ndimdala ngantoni oku kuwa?
Iintaka zidlula emafini.
Ngalo lonke ixesha umnqwazi omnye
kwaneembadada ezifanayo zomququ!
kwaye yacaca ngcono
ngamathandabuzo kuphela aya kungena
Ukuntywilisela uncuthu lwengoma
Abantwana bayeza -
Ndindwendwele ingcwaba lakhe eKiso.
Ukuvula umnyango kuya kubonisa uBuddha
Bakhomba ngesandla sabo -
woyike ukucinga kwakhe
kukho indlela emfutshane yokuya enyangeni.
Akukho negqabi elinye
Nokuba inyanga ayilali
Amahashe aqhaqhazelisa amazinyo
Baziva ivumba labo
Umsonto wentonga yokuloba
imbonakalo yam emhlophe
Yonke into esiyiqokelelayo
elunxwemeni kumaza aphantsi-
Akukho mntwana uza kusondela
Yonke into ibonakala ingahambi
Ngale ntsasa yekhephu
Ukuba bayavala kusasa
Kungenxa yenzondo yabantu!
Isebe eliqhakazileyo lomthi weplum
Ukusuka kwi-violet yamafu
Ingcinga yam ijolise ngqo.
Ndiyabushiya obu bomi
Iingcango zomlilo ziyaphuma
Akukho nto ikhoyo
Amafu encotsheni yentaba
Nentethe iyaqakatha esihlanjeni.
Ngaphantsi kweenkwenkwezi ezibunileyo
Iskere sam sibetha ingcwaba
Amawaka amancinci amhlophe entlanzi
Ngaba awufuni ukuhamba
khumbula olo thando namhlanje
abantwana bam abaleleyo
Kweli hlabathi lingcolileyo
Okona kubi kwe-echo
kukuba itsho njalo
Kude kude trill.
phakathi kweepayini kunye namatye
Lo mbongo uyahluma.
Ukuhamba ngelaphu lakhe
le inyanga icace gca
UJose Juan Tablada
lags phezu kweentyatyambo
igutyungelwe ngale ntsasa
Ngaba unesibindi sokwabelana ngehaikus yakho okanye oyithandayo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Yintoni ihaikus?
URoberto Soto sitsho
U-Borges ubhale "ubundlobongela"? Jonga usisidenge.
Phendula URoberto Soto
Imibongo bubugcisa bokuthi umntu avakalelwe njani, achaze, abale, abala, yenye yazo abo bangawuqondiyo umbongo.Imfitshimfitshi esiyibhalayo sonke, ngakumbi abo bazenza ngathi bayalinganisa esikubhalayo.
Phendula kwi patto
indlela inde kodwa iba mfutshane yile haiku
I-haiku ka-Benedetti yeyona nto ibalaseleyo kuyo yonke
Umdala uBenedetti. Ndiya kukhuthazwa ukuba ndibhale enye kwaye ndiyithumele
UJuan Haiku sitsho
Indlela inde? Yintoni uCarlos? Yintoni engalunganga?
Phendula uJuan Haiku
Uthando uthando uthando sitsho
zonke izithunzi zigutyungelwe
Phendula Ame Ame Ame
UMarco Ortega sitsho
Phendula uMarco Ortega
Iinoveli ezi-6 ezinemibala emnyama neyoyikisayo ekhethwe ngoJulayi